Xaaraan Baa Tiri Ani i Ruug - Xalaal Baa Tiri Ani i Reeb .. Madaxda Sare Ee Somaliya Oo Is Bahaysi Iska Soo Horjeeda Sameysanaysa
Dalka ayaa xiligan galay xaalad siyaasadeed oo jahwareer wata, waxaana wali kala cadeyn nuuca doorasho ee dalka ka dhaceysa, xili waqtiga u haray Baarlamaanka iyo Madaxda sare ee dalka ay bilooyin yar ka harsan yihiin.
Madaxda sare ee dalka ayaa siyaabo kala duwan u shaaciyay in dalka ka dhaceyso doorasho waliba xiliga loo qorsheesyay, hasa ahaatee madaxda ayaana wali sheegin nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa iyo sida looga gudbayo caqabadaha adag ee xiligan taagan.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Madaxda ugu sareysa dalka sida Madaxweynaha, Gudoonka labada Aqal ee Baarlamaanka iyo Ra’isul Wasaaraha isku khilaafsan yihiin doorashada dalka ka dhaceysa iyo qaabka loo wajahayo.
Madaxda sare ayaa hada bilaabay in is kooxeesi dhexdooda ah ay sameestaan , waxaana la sheegay in Madaxweyne Farmaajo hada isku ra’yi yihiin Gudoomiyaha golaha shacabka Mursal iyo Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Aqalka sare iyo R/Wasaare ku-xigeenka dalka oo isagu ishafalato ah
Dhinaca kale ayaa la sheegay in aragti ahaan aad isugu dhaw yihiin Gudoomiyaha Aqalka sare, mudane Cabdi Xaashi iyo Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya Kheyre iyo Gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqal sare Mudane Bukhaari iyo beesha caalamka oo la aragti ah .. garabkan aragti ahaan waxay kala duwan-yihiin Garabka Farmaajo hogaamiyo.
Khilaafka iyo kala aragti duwanaashaha doorashada dalka iyo nooca ay noqneyso ayaan wali si rasmi ah aysan uga wada hadlin labadan garab, hasa ahaatee wararka laga helayo ilaha ku dhaw dhaw ayaa muujinaya in kala aragti duwanaasho weyn ay jirto.
Madaxweyne Farmaajo iyo Kheyre ayaa la sheegay in aragti ahaan xiligan aad u kala duwan yihiin, waxaana labada masuul isku hayaan doorashada xiliga ay dhaceyso iyo waliba nooca ay noqon doonto.